downloads 22 837
Dị na mbụ, na-arụ ọrụ mere site otu IFDG. The nlereanya mara mma, ụda dị nnọọ otú ha dị ma ndị panel yiri n'ụzọ zuru ezu arụmọrụ. A oké mmeta ibudata enweghị na-eche!
The Boeing 767 bụ a ejima-engine airliner ụdị ogologo osisi, mepụtara site na American ụlọ ọrụ Boeing. O mere ka ya mbụ ụgbọ elu 26 September 1981. The nsụgharị dị iche iche nke 767 njem pụrụ ibu n'etiti 181 na 375 ndị na ndụ batrị dịgasị iche n'ebe 9400 ka 12 200 km, dabere na version na nhazi nke unit.
Onye edemede: Equipe IFDG…